KT Generator Diesel Marika hafa
KT Generator mahery vaika
Famaritana: KT-cummins Series Diesel Generator Cummins (NYSE: CMI) dia natsangana tamin'ny 1919 ary manana foibe any Columbus, Indiana, Etazonia. Cummins dia nomena anarana taorian'ny nanorina azy, Claire Lyle Cummins, izay mekanika mpamorona fiara sy mpamorona mekanika. Ny Cummins dia manana foibe any Columbus, Indiana, Etazonia. Manome serivisy ho an'ny mpanjifa ny orinasa amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny fizarana 550 sy fivarotana mpivarotra mihoatra ny 5000 any amin'ny firenena sy faritra 160 manerantany. Cummins dia manana 34.600 ...
Famaritana: Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. any Japon dia naorina tamin'ny 1884. Izy io dia iray amin'ireo orinasa 500 manerantany ary laharana faharoa amin'ny sokajy milina ankapobeny. Mitsubishi Heavy Industries dia nanomboka namorona sy namokatra motera diesel sy set generator (generator) tamin'ny taona 1917. Ny Mitsubishi Heavy Industries dia namita manokana ny famolavolana, ny famokarana ary ny fitsapana ireo singa fototra ao aminy. Mitsubishi diesel generator set dia afaka miasa maharitra eo ambanin'ny conditio tontolo iainana mahery ...
Famaritana: Deutz FAW (Dalian) Diesel Engine Co., Ltd. dia noforonin'ny mpanorina ny indostrian'ny motera manerantany — Alemana Deutz AG sy ny indostrian'ny fiara sinoa Ny mpitarika ny China FAW Group Corporation dia namatsy vola mitentina RMB 1,4 miliara tao anatin'ny 50% ny tahan'ny ary natsangana tamin'ny Aogositra 2007. Misy mpiasa 2.000 ary fahaiza-mamokatra 200 000 isan-taona. Ny orinasa dia manana sehatra matanjaka eran-tany. Ny vokatra mitarika dia C, E ∕ F, DEUTZ sehatra vokatra telo, andiany telo o ...
Famaritana: Perkins Engine Co., Ltd. dia sampana iray an'ny Caterpillar Corporation ary iray amin'ireo mpamatsy lehibe indrindra ny maotera diesel sy gazy voajanahary voajanahary. Perkins Engine Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 1932, niaraka tamin'ny famoahana motera efa ho 400.000 isan-taona. Perkins dia manome motera diesel sy gazy 4-2000 kW ho an'ireo mpanamboatra fitaovana lehibe toa an'i Chrysler, Ferguson ary Wilson. Maherin'ny 800 ny mpanamboatra nisafidy ny vahaolana herinaratra Perkins amin'ny fambolena, famokarana herinaratra ...
Famaritana: Doosan Mobile Power dia fizarana iray ao amin'ny vondrona Doosan any Korea Atsimo. Tamin'ny volana Novambra 2007, Doosan Group, iray amin'ireo orinasa Fortune 500 manerantany, dia nahazo ampahany tamin'ny orinasan'i Ingersoll Rand. Taorian'ny andiana fampidirana orinasa dia niorina ihany ny Doosan Mobile Power Division. Doosan Mobile Power dia manome fitaovana mandeha amin'ny herin'ny finday ho an'ny fotodrafitrasa eran-tany, fitrandrahana, fanamboarana sambo, fampandrosoana angovo ary indostria fananganana injeniera hafa, ao anatin'izany ny air mobile c ...
Famaritana: Ricardo Series Engine Diesel Generator miaraka amina tombony lafo Product Range: Ricardo Genset, Kofo Genset, Ricardo Diesel Generator, Kofo Diesel Generator, Ricardo Kofo Power Station Power Generator, Genset, Generator napetraka, Power Station, Generating set, Kentpower, Cummins Diesel Generator, Generator Parts, Geneset Parts, Perkins Generator, Silent Diesel Genera Famaritana:
Famaritana: Yanmar dia mpamokatra motera diesel japoney manana tantara 100 taona mahery. Manamboatra motera ho an'ny fampiharana marobe ny orinasa: kodiarana an-dranomasina, fitaovana fanamboarana, fitaovana fambolena ary andiana generator. Ny orinasa dia manana foibe any Chaya, Distrika Avaratra, Osaka, Japon. YANMAR Co., Ltd. any Japon dia nitarika an'izao tontolo izao amin'ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny etona fandotoana ambany, feo ambany ary hozongozona kely. Ny tanjon'i Yanmar dia ny hahatonga ny en ...
Famaritana: Niorina tamin'ny 1951, Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd. (Yuchai Group raha fintinina) dia manana foibe ao amin'ny Yulin, faritra mizaka tena any Guangxi Zhuang. Izy io dia orinasa iray amin'ny fitantanana fampiasam-bola sy famatsiam-bola, mifototra amin'ny fampandehanana vola sy fitantanana fananana. Amin'ny maha-orinasa iraisan'ny fanjakana marobe azy, manana mihoatra ny 30 ny fananana, fananana na mpiombon'antoka iraisana miaraka aminy, manana fananana mitentina 40,5 miliara yuan ary mpiasa efa ho 20.000. Yuchai Group dia fandoroana anaty ...
FUJIAN KENT MEKANIKA SY JIOLIKA CO., LTD (fohy ho an'ny KENTPOWER), natsangana tamin'ny taona 2005 niaraka tamin'ny renivola voasoratra anarana $ 15 tapitrisa, famolavolana sy fanamboarana setara mpamokatra gazoala, setroka mpamokatra gazy voajanahary, rafitra herin'ny masoandro, fampivondronana, fivarotana ary fikojakojana fanompoana. Ny orinasa miorina ao an-tanànan'i Fuzhou, faritanin'i Fujian, miaraka amin'ny velarany 100000 metatra toradroa, mihoatra ny mpiasa 100. Ny vokatra dia ampiasaina indrindra ho hery famerenam-bola na hery vonjy taitra amin'ny sehatra manan-danja maro, anisan'izany ny làlambe, lalamby, trano fandraisam-bahiny, hotely, toeram-pitrandrahana, sekoly, hopitaly, hotely, orinasa ary telecomunication sy rafitra ara-bola sns.
Vaovaon'ny orinasa sy ny vaovaon'ny indostria
DIESEL GENERATOR NAMONJY NY HUSBANDRY FANAMBADIANA
Ny indostrian'ny fiompiana anaty rano dia nitombo avy amin'ny ambaratonga nentim-paharazana ka hatramin'ny filàna asa mekanika. Ny fanodinana sakafo, ny fiompiana fitaovana, ary ny rivotra na ny kojakoja fanamafisana dia mihetsika avokoa, izay mamaritra ny ...
Ny setrin'ny mpamokatra herinaratra nomanina ho an'ny hopitaly sy ny famatsiana herinaratra nomanina ho an'ny banky dia manana fepetra mitovy. Samy manana ny mampiavaka ny famatsiana herinaratra mitohy sy ny tontolo milamina. Manana fepetra hentitra momba ny fahamarinan-toerana ...
DIESEL GENERATOR napetraka ho an'ny indostrian'ny fifandraisana
KENTPOWER dia mahatonga ny fifandraisana ho azo antoka kokoa. Ampiasaina matetika amin'ny famokarana herinaratra amin'ireo tobin-tsolika amin'ny indostrian'ny serasera ny mpamokatra herinaratra diesel. Ny tobim-paritany avaratry ny faritany dia manodidina ny 800KW, ary ny tobin'ny munisipaly dia 300-400KW. Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana ...
Ny fepetra takiana amin'ny génerie diesel amin'ny fananganana saha dia ny fananana fahaiza-manao anti-harafesina avo lenta, ary azo ampiasaina eny ivelan'ny trano amin'ny toetrandro rehetra. Afaka mihetsika mora foana ny mpampiasa, manana fampisehoana marin-toerana ary fandidiana mora. KENTPOWER dia fampisehoana vokatra manokana ho an'ny sehatra: 1. ...
Ny milina mpamokatra tafika dia fitaovana famatsiana herinaratra lehibe ho an'ny fitaovam-piadiana eo ambanin'ny toe-piainana. Ampiasaina indrindra izy io mba hanomezana hery azo antoka, azo itokisana ary mahomby amin'ny fitaovam-piadiana, baiko miady ary fanohanana fitaovana, hiantohana ny fahombiazan'ny ady fitaovam-piadiana sy ny eff ...
Fanampin'ny birao: No.12, Jinzhou North Road, Fuzhou, Sina
Fanampian'ny orinasa: Faritra indostrialy Tieling, Fuzhou, Sina
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatray na pricelist, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray aminao izahay ao anatin'ny 24 ora.